Dr. Saadiq Eenow: Dadnimo Yeelo oo Baro Taariikhda Dadkaaga iyo Dalkaaga (dhegayso) – Radio Daljir
Maarso 8, 2020 8:08 g 2
Dulucda Mawduuca Asbuucaan: Dadnimo yeelo, dalkaaga baro, taariikhdaada daris, oo Soomaalinimadaada ku faan; ha oggolaan in dalkaaga lagugu diro, oo ha oggolaan in Soomaaliga walaalkaa ah cadow lagaaga dhigo; ha oggolaan in cadowga dadkaaga iyo dalkaaga lagu walaalaysiyo. Dad jira noqda, oo dad ka dashay, dalna leh!
Caawa & Daljir iyo Maxamed Lakiman, Daljir Garoowe ( dhegayso| daawo )
Masha.Alaah mawduuc wanaagsan
Omar abdisamad 4 years ago
Masha’allah, waa mowduuc qiima badan oo aan ka helay faa’iido weyn.